Ihe Mere I Ji Kwuru Okporo Elevator Pitch | Martech Zone
Tuesday, January 3, 2017 Wenezdee, Jenụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Na nkwadebe maka ihe omume anyị ga - eme n'afọ a, VP nke Business Development - onye ọrụ ntanetị - Onye na-ese Harrison, na m na-atụle ihe niile anyị akpọ asị banyere ịkparịta ụka n'networkntanet. Top na ndepụta ahụ bụ ire ere na ọdụ mbuli elu. Oge ụfọdụ, m na-aga emume ndị a, ọ na-adị m ka mmadụ eti uzu na onye ọ bụla esi n’akụkụ ya na-efegharị. Ha na-agba bobb na-akpa akwa site na ndị bịara ya na-atụgharị ibe ha na-achọ egwuregwu.
Ma ọ naghị adịkarị.
Harrison etinyela ụfọdụ n'ime ihe ịkparịta ụka n'mostntanet a na-echefu echefu na mba ahụ. Kama ihe elevator pitch, A na-agba ndị bịara ya ume ịkọrọ ihe na-eme ha dị egwu na 30 sekọnd. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ịdị ka hokey ntakịrị, ọ na-etinye ndị bịara ya ebe ahụ, ha ga-enyocha miri emi na-enye akụkọ gbasara onwe ha na ihe ha ji eme ọnụ, ma ọ bụ na-eche banyere ya, ma ọ bụ ihe ha chọrọ ịbụ. Kama ịbụ a pitch, ọ bụ ọhụụ ozugbo banyere n'akụkụ mmadụ nke onye guzo ma ọ bụ nọ ọdụ n'etiti ndị bịara abịa.
Na ihe omume m gara, anaghị m apụ apụ na-agbalị icheta onye kaadị azụmahịa bụ onye. Amaara m ihe e ji amata onye ọ bụla na-agaghị echefu echefu. Dịka ọmụmaatụ, ezutere m David Roux. David bụ onye na-akụ ọkpọ na-enwe mmasị igwu egwu na Chọọchị ya na Sọnde ọ bụla. Wezụga nke ahụ egwu njirimara, David bụ onye ndu ndu maka ndị na-eto eto. N'oge na-adịghị anya, m goro David ka ọ zụọ nwa m nwanyị.
Nsogbu nke Pitches
Enwere nsogbu ole na ole na ọdụ ụgbọ elu:
Ebum n'uche - Gini mere ị ga - eji chee na onye gafere gị ga - achọ ka a maa gị ọkwa ma ọlị?
Amaghi - Kedu ka ị ga - esi ghọta nsogbu onye ahụ gafere gị na - eche ihu n’amaghị ihe ọ bụla gbasara ha?
Target - Ọtụtụ oge ọ bụghị ndị na - ahụ maka ịkparịta ụka n'you'rentanet ka ị ga - azụ ahịa, ọ bụ onye nọ na netwọkụ ha ka ana - ezife ozi gị site n'okwu ọnụ.
Ihe I Kwesịrị Sharekọrọ
Ọ bụrụ na ịmara na onye ahụ gafere gị nwere netwọkụ dị egwu nke ndị ahịa ị nwere ike inyere aka, kedu ka ị ga-esi gwa ha okwu n'ụzọ dị iche? Gaghị akụ ha ma ọlị, ka ọ̀ bụ? Agaghị m. Nke a bụ ihe m ga-elekwasị anya:
Awesome - iso onye ahu di n’akuku m nwee mkparita uka ma jukwa n’aka na m kenye ha ihe echetaghi echefu nke ha na echefu n’oge na-adighi anya. Maka m, ọ nwere ike ịbụ na m bụ Onye Ọchịchị Navy nke United States ma ọ bụ nna nwere nna abụọ. Enwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa na obodo ọ bụla… mana ọ bụghị ọtụtụ ndị bụ Desert Shield na Desert Storm Veterans ndị rụrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri na-ebugharị ma zụlite ụmụaka abụọ na-enweghị atụ n'onwe ya!
Trust - Achọrọ m ịmụta onye onye ọ bụla gafere m nwere ma netwọkụ nwere yana a onye ndụmọdụ tụkwasịrị obi nke. Ọ bụrụ na onye m na-eguzo gafee nwere netwọkụ dị egwu nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ na ha na-adụ ọdụ na ha bụ ndị ahịa zuru oke maka m, Achọrọ m itinyekwu oge na-esonye ha ma mụta otu anyị nwere ike isi baara otu uru ozo.
-akụziri - Kama inyocha onye ahụ n’akụkụ m, achọrọ m ịkụziri ha ihe. Achọrọ m ịkụziri ha ụdị uru m ga - eweta ndị ahịa ha na ụdị nsogbu anyị na - enyere aka. Achọrọ m ịkekọrịta ihe eji eme ihe n'ezie na ha ga-echeta ma kwughachi ya na ndị folki nọ na netwọkụ ha tụkwasịrị ha obi.
Jụọ - Cheta ịbụ nke bara uru? Achọrọ m ịchọpụta ihe m ga-eme iji baara onye a uru. Achọrọ m ka o doo m anya na m na-arịọ ha ka ha nyere ha aka ịnweta netwọkụ ha ebe ọ bụ na ha tozuru oke ngwaahịa na ọrụ ụlọ ọrụ m.
Ndị ọrụ ntanetị kacha mma m na-arụ ọrụ maara ihe nzuzo na ọtụtụ anaghị eme. Ha lekwasịrị anya abụghị ndị na ịkparịta ụka n'networkntanet ihe… ọ bụ ndị mmadụ na ndị bịara nwere n'ime ha ogologo netwọk. Ikekwe gị na ndị ọzọ na-abịa 50 ihe omume. Olileanya gi adighi n'ebe ahu, o bu otutu puku olile anya n'ime otu okwu onu na ebe ozo!
Olulu mmiri mbuli pitch.
Tags: david rouxokporo mmiri mbuli pitchokporo mmiri oluluelevator pitchonye na-ese ihenetworkihe omume netwọkụnetwọkihe omume ntanetị
Etu esi edetu isi okwu ndi mmadu ghari igha